CIIDAMMADA PUNTLAND OO U SOO RUQAANSADEY DHINACA SOMALILAND, DAGAAL MAR KALE KA DHEX-QARXI KARA IYO WARARKII U DAMBEEYEY EE DAGAALKA TUKE-RAQ | Haldoor News
CIIDAMMADA PUNTLAND OO U SOO RUQAANSADEY DHINACA SOMALILAND, DAGAAL MAR KALE KA DHEX-QARXI KARA IYO WARARKII U DAMBEEYEY EE DAGAALKA TUKE-RAQ
Tuke-raq(Gebogebonews)-Wararka laga helaayo deegaanka Tukaraq ee muddooyinkii dambe dagaalku ku dhex-maraayey dawladda Somaliland iyo Ciidammada Maamul-goballeedka ah ee Puntland, ayaa la soo sheegayaa in laga dareemayo dhaq-dhaaqyo ciidan oo aad u xooggan oo Maamulka Puntland ay ku qorsheynayaan siddii ay mar kale weerar ugu soo qaadi lahaayeen ciidamada jiida hore ee Somaliland.
Sida ay ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay, ayaa sheegaya in Maamulka Puntland ay qorsheeyeen dagaal ay maalmaha soo socda ku soo qaadan dhinaca Somaliland ka dib markii hore looggu jabiyey weeraro gaadmo ah oo ay ku soo qaadeen ciidamada Somaliland ee ku sugan jiida hore. Waxaana ay wararku tilmaamayaan in dhaq-dhaqaaqyaddaas si weyn loogga wado meel ka mid ah gudaha Puntland iyo weli ba deegaanka Tukaraq iyaga oo sida la sheegay halkaas soo dhoobey ciidamo Maleeshiyaad ah oo tiro badan ku waasi oo ku gaashaaman hubabka noocyaddiisa kala duwan.
Maleeshiyaadka ciidamada ee Puntland, ayaa sidoo kale la sheegyaaa in ay u soo ruqaansadeen dhinaca Somaliland, taasi oo sababi karta sida oo kale na ay dadka deegaanku cabsi ka muujinayaan in dagaal uu mar kale isla toddobaadkan soo socda uu ka dhex-qarxo dawladda Somaliland iyo Maamulka nabad-diidka ah ee Puntland. Waxaana ay dadka deegaanaddaasi cabsi xoogga ka muujinayaan dagaalada dhex-maraaya Somaliland iyo Puntland oo saameyn xooggan ku yeeshay xaaladdoodii nololeed.
Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda Warfaafinta ee Maamulka Puntland Md. Cabdi Xirsi Cali (Qar-jab) oo Warbaahinta la hadlay, ayaa muujiyey in dagaal ay mar kale ku soo qaadi karaan Somaliland, waxaana uu ku goodiyey in haddii aanay Somaliland iskaga bixin deegaanada gobalka Sool ay soo qaadayaan dagaal uu sheegay in ay ka dhalan karto khasaare ka badan kii ka dhashay dagaaladdii hore.
“Dagaalkii dhawaan ka dhacay Tukaraq waxa hore uga dhacay khasaare weyn oo labada dhinac ba ah, markaa haddii aanay Somaliland deg-dag uga bixin dhulkaas waxa mar kale ka dhici doona khasaare kii hore ka weyn, khasaarahaas na mas’uuliyaddeed waxa aduun iyo aakhiro ba qaadanaya ciddii dagaalka geysatay oo weerarka iyo hujuunka ba keentay oo weerarka bilowdey.”. Cabdi Xirsi Cali (Qar-jab)
Md.Cabdi Qar-jab oo sida oo kale hadalkiisa sii wata, ayaa dadka reer Puntland fariimo kicin iyo abaabul ah warbaahinta u mariyey, kuwaasi oo uu ugu baaqey in ay soo bar-bar istaagaan dagaal uu sheegay in uu u dhaxeeya Somaliland iyo Puntland.
“Reer Puntland gudo iyo dibad ba waxa aanu ugu baaqeynaa in ay gacan siiyaan ciidamadooda dalka difaacaya, waana waajibaad saaran arrintaasi oo qofku waa in uu difaacaa Maalkiisa, Sharaftiisa iyo Naftiisa ba, qofku in uu intaas difaaco diintisaa u ogol, gurigaaga haddii laguugu yimaado oo xoolahaaga laguu gu yimaado, Sharaftaada laguu gu yimaado diinta Islaamku waxa ay kuu oggoshahay in aad intaas difaacdid, markaa laba arrimood bay diintu ka qabtaa oo haddii qofku uu intaas difaacan waayo Naar buu muteysanayaa, haddii uu difaacana wuxu muteysanayaa waa Janno, markaa maanta horta halkaa fursad baa idiin ku jirta oo Janno ah. Reer Puntland cid weerari maayaan, cid dal ka qabsan maayaan, cidna ma xumeynayaan, goballo reero degan yihiin kuma socdaan laakiin goballadoodii ayaa la rabaa in qori lagu qabsado.”.
Ugu dambeyntii, Siyaasi Qar-jab, waxa uu meesha ka saaray in wax wada-hadal ah ay la furayaan Somaliland isaga oo beeniyey hadal ka soo yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Somaliland oo sheegay in wada-hadal u furmay Somaliland iyo maamulka Puntland.
“Sacad Cali Shire ayaan maqlaayey oo leh Puntland baa wada-hadal noo socdaa, dhulka Puntland cid laga la hadlaayo iyo la la hadlayaa midna ma jirto, ninkii wada-hadal rabaa gurigiisa ha tago oo ka dib wixii laga wada-hadlaayo ha laga wada-hadlo laakiin inta Somaliland ay ku jirto gobalka Sool iyo meelaha la midka ah, waxa wada-hadal ah oo Puntland la yeelanaysaa ma jirto, markaa dadka yaan loo sheegin riyo been ah iyo waxaan waxba ka jirin.”. Ayuu yidhi Cabdi Qar-jab.
Maleeshiyaadka Maamulka Puntland ee la sheegay in ay soo ruqaansadeen, ayaa wararku tilmaamayaan in ay ku soo dhow yihiin agagaarka deegaanka Tukaraq oo hore ay beesha caalamku uga codsatay in ay dib uga qaadaan ciidamaddooda. Lama na garanaayo illaa hada sababta keentay in mar kale ay dagaal ku baaqaan dawladda Puntland iyada oo la sheegay in dhex-dhexaadin ay qaramada midoobey ka waddo arrintaasi balse hada u muuqaneysa mid aan waxba ka bedalin dagaalkii ay ku baaqeen Maamulka Puntland.